घरभित्रै मृ*त अवस्थामा भेटीए दिपेश थापा, फोन नउठेर घरमै पुगेर हेर्दा नाकमुख बाट रगत बग्दै ! – Online Nepal
घरभित्रै मृ*त अवस्थामा भेटीए दिपेश थापा, फोन नउठेर घरमै पुगेर हेर्दा नाकमुख बाट रगत बग्दै !
April 27, 2020 878
अमेरिका, १५ वैशाख । अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित यूलेसमा बस्दै आएका गैरआवासीय नेपाली युवा दिपेश थापा घरभित्रै मृत भेटिएका छन् । बिगत १७ बर्षदेखी अमेरिकामा बस्दै आएका ३८ बर्षिय थापा बिहिवार आफ्नै निवासमा मृत भेटिएका हुन् । दिपेशका दाजु दिवश थापाले दिएको जानकारी अनुसार बिहिवार बिहान पटक पटक फोन गर्दा समेत नउठेपछि भेट्न कोठामा पुग्दा मृत भेटिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मुखबाट रगत निस्किएको देखिएपछि एम्बुलेन्सलाई फोन गरिएको थियो ।
एम्बुलेन्सको चिकित्सकिय टोलीले दिपेशको निधन भइसकेको जानकारी दिएको थियो । स्थानिय समय अनुसार शनिबार दिउँसो दिपेशको हिन्दु परम्परा अनुसार दाहसंस्कार गरिएको छ । नेपालमा पोखरा स्थायी घर भएका थापाका एक श्रीमती, दाजु, बैनी र बुवा, आमा छन् । अध्ययनका लागि अमेरिका आएका थापाका बुवा, आमा र बैनी नेपालमा छन् ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण अमेरिकाको कोलोराडो राज्यको बोल्डर निवासी लोकेन्द्र कार्कीको निधन भएको छ। उनको गत शुक्रबार निधन भएको हो। कार्की लामो समयदेखि बोल्डरमा सपरिवार बस्दै आएका थिए। उनका दुई छोरी र एक छोरा छन्। नेपाल गएकी उनकी श्रीमती लकडाउनका कारण उतै रोकिएकी छन्।
बोल्डरस्थित कम्युनिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको कार्कीका नजिकका व्यक्ति पारस ओझाले जानकारी दिएका छन् । ११ दिन अघि उनी कोभिड १९ को उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।
नेपालमा बिराटनगर महानगरपालिका वडा ३, घर भएका कार्कीका एक श्रीमती, एक छोरा र दुई छोरी छन् । कार्कीकी श्रीमती र कान्छी छोरी केही समयका लागि नेपाल गएको जानकारी दिइएको छ । कार्की नेपालमा छँदा प्रहरी सेवामा कार्यरत थिए ।
Prevकोरोनाका बिरामी बढ्दै गएपछि आजबाट सरकारले जारि गर्यो ७७ जिल्लामा यस्तो सूचना, घरबाहिर ननिस्कनु होला !
Nextविश्वभर ह्वात्तै घट्यो कोरोना संक्रमण र मृ’त्युदर, कुन देशमा कति ? (तालिकासहित)
अर्जुन बिकको ड*रलाग्दो बास्तबिकता,डेरामा यस्तोसम्म भेटियो,श्रीमती भनिएकी किशोरीलाई ब$न्धक बनाइ क$रणी.? (हेर्नुहोस भिडियो)